कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन 'डाइरेक्ट पीसीआर'- विविधा - कान्तिपुर समाचार
असार ३१, २०७७ डा. विजयकुमार ढकाल
कोभिड- १९ को लक्षण अन्य सामान्य श्वासप्रश्वास रोगको भन्दा खासै फरक नभएकाले प्रयोगशालामा परीक्षण नगरी कोभिड- १९ रोग लागेको पुस्टि हुँदैन । प्रयोगशालामा संक्रमण पत्ता लगाउने धेरै तरीकाहरु मध्येमा पीसीआर श्रेष्ठ प्रविधि हो । नेपालमा पनि विगत केहि महिनादेखि पीसीआर विधिबाट शंकास्पद नमुनाहरुको परीक्षण भैरहेका छन् । संक्रमित व्यक्तिहरुको संख्या बढ्दै गएकोले पीसीआर परीक्षणको माग पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा अहिले भएका पीसीआर परीक्षण विधिहरुले माग अनुसारको संख्यामा पीसीआर परीक्षण गर्न सकेका छैनन् । यसका अतिरिक्त पीसीआरलाई चाहिने विभिन्न सामाग्रीहरु (जस्तै भिटिएम, स्वाब, एक्स्ट्राक्सन् रिएजेन्ट, प्लास्टिक कन्सुमेबल इत्यादि) को सुलभ तथा सुपथ आपूर्तिमा अनेक बाधाहरु थपिएका छन् । किनभने यिनै सामग्रीहरु सारा विश्वलाई चाहिएको छ । यसर्थ पीसीआर परीक्षण क्षमता बढाउन नँया प्रविधिको अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । परीक्षण क्षमता बढाउन धेरै देशमा प्रयोग भएको यस्तै एउटा सफल प्रविधि हो - डाइरेक्ट पीसीआर।
डा. ढकाल अमेरिका, टेक्ससस्थित सोनीक रेफरेन्स ल्याबको मलेकुलर विभागका निर्देशक हुन् । प्रकाशित : असार ३१, २०७७ १६:०७
असार ३१, २०७७ अवधेशकुमार झा
राजविराज — सोमबार साँझदेखि सम्पर्कविहीन सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका ३ का ४५ वर्षीय त्रिभुवन राम मृत फेला परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोषकुमार खड्काका अनुसार, रामको शव सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ स्थित मुतनी खोलामा बुधबार फेला परेको हो । उनी २९ गते साँझ घरबाट निस्केपछि नफर्किएकाले परिवारले असार ३० गते प्रहरीमा खोजतलासका लागि निवेदन दिएका थिए । एकान्त धानखेत नजिक नदीमा भेटिएको शवको निधारमा चोट समेत देखिएको प्रहरी निरीक्षक खड्काले बताए । ‘घटना रहस्यपूर्ण छ’, उनले भने, ‘सुक्ष्मरुपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
रामकी श्रीमती घुरनीदेवी पतिको हत्या भएको आरोप लगाएकी छन् । शव पोस्टमार्टमका लागि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा राखिएको छ ।
प्रकाशित : असार ३१, २०७७ १५:५५